विश्वमा हरेक ७ जनामा ​​१ जना माइग्रेनबाट पीडित, पुरुषको तुलनामा महिलामा तीन गुणा बढी - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ विश्वमा हरेक ७ जनामा ​​१ जना माइग्रेनबाट पीडित, पुरुषको तुलनामा महिलामा तीन गुणा बढी
विश्वमा हरेक ७ जनामा ​​१ जना माइग्रेनबाट पीडित, पुरुषको तुलनामा महिलामा तीन गुणा बढी
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७९ असार ६ गते, १२:२२ मा प्रकाशित
एक अनुमान अनुसार १०० करोडभन्दा बढी मानिस अर्थात् प्रत्येक ७ जनामा ​​एक जना माइग्रेन रोगबाट पीडित छन् । पुरुषको तुलनामा महिलामा माइग्रेन हुने सम्भावना तीन गुणा बढी हुन्छ । माइग्रेनबाट पीडित हरेक १० जनामध्ये ८ जना महिला छन् । महिलामा एस्ट्रोजेन हर्मोनमा हुने परिवर्तनका कारण उनीहरुलाई माइग्रेन दुख्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
चिन्ताको कुरा यो छ कि यसबाट पीडित हुँदा १० मध्ये ९ जनाको दैनिकी नराम्ररी प्रभावित भएको छ । उनीहरुले पटक्कै काम गर्न सक्दैनन् । धेरैलाई कब्जियत हुने, घाँटी दुख्ने, बारम्बार मुड परिवर्तन हुने, बारम्बार पिसाब लाग्ने, आँखा कालो हुने, माइग्रेन दुख्ने, बोल्न गाह्रो हुने, हातखुट्टामा सुई ले खोपको जस्ता लक्षण देखिन्छन् । यी लक्षणहरू पहिचान गरेर, दुखाइबाट बच्न उपायहरू लिन सकिन्छ।
के माइग्रेन एक न्यूरोलोजिकल समस्या हो?
यो मस्तिष्क वा स्नायुलाई असर गर्ने रोग हो। टाउको दुख्ने, वान्ता हुने, नाकमा पानी आउने, उज्यालो र आवाजले दिक्क बनाउने जस्ता समस्या देखिन थाल्छ । माइग्रेन प्रायः पुरानो हुन्छ, अर्थात्, एकपटक पीडित भएपछि यसको समस्या वर्षौंसम्म रहन सक्छ।
माइग्रेन हुनुको कारण के हो ?
माइग्रेनका कारणहरू फरक-फरक व्यक्तिहरूमा फरक-फरक हुन सक्छन्। यसको बावजुद, त्यहाँ धेरै सामान्य कारणहरू छन्, तिनीहरूलाई ट्रिगर भनिन्छ। उज्यालो प्रकाश, मौसममा परिवर्तन, दिनचर्यामा परिवर्तन, खानाको समयमा परिवर्तन, निर्जलीकरण, कडा गन्ध र हर्मोनल परिवर्तनले पनि माइग्रेन सुरु हुन्छ।
कति प्रकारका छन्?
पहिलो: आभा संग माइग्रेन। यसले अनुहारमा दागहरू देखिन्छ। यो दुखाइ २० मिनेट देखि एक घण्टासम्म रहन्छ।
दोस्रो: आभा बिना माइग्रेन। यसमा चार चरणहरू छन्। यसले टाउकोको एक छेउमा बढी दुख्ने गर्छ। नाकबाट पानी बग्ने, वान्ता हुने र घाँटीमा अप्ठेरो हुने जस्ता समस्या हुन्छन् । यसको दुखाइ धेरै दिनसम्म रहन्छ।
माइग्रेन बाहेक ३ प्रकारका टाउको दुखाइ पनि हुन्छ ।
तनाव: यस अवस्थामा पीडा बिस्तारै बढ्दै जान्छ। टाउकोको अगाडि वा पछाडि दुखाइ महसुस हुन्छ। यो ३० मिनेट देखि ७ दिनसम्म रहन सक्छ।
साइनस: माथि, आँखा वरिपरि दुखाइ। यो दुखाइले ज्वरो पनि ल्याउँछ। नाक बन्द हुन्छ । अनुहारमा दबाब महसुस हुन्छ।
क्लस्टर: टाउको एकदमै दुख्छ। दुखाइ बीच-बीचमा छ। पीडितले बेचैन महसुस गर्छ। लत एउटा ठूलो कारण हो।
माइग्रेनबाट तत्काल राहतका लागि:
आँखा बन्द गर्नुहोस् र चिसो पानीले नुहाउनुहोस्।
१० मिनेटको लागि चिसो पानी ले स्पोंजिंग गर्नुहोस् । प्रत्येक ३० मिनेटमा दोहोर्याउनुहोस्।
बोल्नुहोस्, दबाइएका भावनाहरू बाहिर निकाल्नुहोस्।
माइग्रेनलाई ट्रिगर गर्ने चीजहरूबाट आफूलाई हटाउनुहोस्, जस्तै उज्यालो प्रकाश, आवाज, आदि।
दीर्घकालीन राहतको लागि:
५सम्म गन्दै श्वास लिनुहोस्। ५ सम्म गणना गर्दा श्वास छोड्नुहोस्। श्वास छोड्दा शरीरले आराम पाउने कुरामा ध्यान दिनुहोस्। दुखाइ चाँडै कम हुनेछ।
श्वासप्रश्वासको कल्पना गर्नुहोस्
आँखा बन्द गरेर शान्त ठाउँमा बस्नुहोस्। अब श्वास फेर्दा कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंको शरीर आराम गरिरहेको छ र तनाव हट्दैछ। गहिरो श्वास लिनुहोस्, तर धेरै कडा धक्का नगर्नुहोस्। श्वास लिँदा नाकबाट फोक्सो र त्यसपछि छाती र पेटमा गएको महसुस गर्नुहोस्। अब यो यसरी बाहिर आउँदै गरेको महसुस गर्नुहोस्।